तालिवानी अफगानिस्तान : महिलाहरुको खुसी जोगिएला कि अपहरणमा पर्ला ? « News24 : Premium News Channel
तालिवानी अफगानिस्तान : महिलाहरुको खुसी जोगिएला कि अपहरणमा पर्ला ?
काठमाडौं । तालिवान २० वर्ष पहिले अफगानिस्तानमा पहिलो पटक सत्तामा आएको थियो । त्यतिखेर त्यहाँका महिलाहरुको टाउको काट्ने, ढु्गाले हानेर हत्या गर्ने र उनीहरुलाई बुर्का लगाउन बाध्य पार्ने जस्ता क्रूरता पहिचान थियो उनीहरुको ।
जब चरमपन्थीहरु सत्ताबाट बाहिरिए, अफगान महिलाहरुले महान प्रगति गरेका थिए । उनीहरु मन्त्री, मेयर, न्यायाधीश र पुलिस अधिकारी जस्ता पदमा पुगे । तर तालिवानको पुनरागमनले महिलाहरुको भविष्यलाई लिएर अनिश्चितताको बादल छाउन थालेको छ ।
संघर्ष गर्नुपर्ने , बलिदान दिनुपर्ने
एक महिला पत्रकार एक शीर्ष अधिकारीबीचको टेलिभिजन साक्षात्कार, जो अहिले शायद संसारको कुनै पनि देशमा समाचार बनेको छ।
महिला र युवतीहरुविरुद्ध तालिवानको क्रूर इतिहास छ । तर तालिवानका एक शीर्ष अधिकारी, मौलवी अब्दुलहक हेमाद, टोलो न्युजका लागि एक महिला टिभी एंकर बेहेस्ता अरघण्डको साक्षात्कार गर्न सहमत भएको थाहा पाएर धेरै छक्क परे।
मंगलवारको अन्तर्वार्ताले अर्को परम्परा तोडेको थियो । यो पहिलो पटक थियो जब तालिवान नेता एक टिभी स्टुडियोमा आए। यो स्पष्ट स्वीकृतिको बावजुद पनि बेहेस्तालाई अझै पनि शंका छ। त्यो अन्तर्वार्तापछि बेहेस्ताले बीबीसीलाई भने, ‘उनी भन्छन् कि उनलाई अफगान महिलाहरुसंग कुनै समस्या छैन, हामी उनको कामलाई समर्थन गर्छौं । तर म डराउँछु ।’
उनले भनिन्, ‘काबुल शहर र उनको स्टुडियोको वातावरण बदलिएको छ। अब उनी टिभीमा आफ्ना पाहुनाहरुसंग विवादास्पद मुद्दाहरुमा खुलेर कुरा गर्दैनन् उनी ध्यान दिएर उनको शब्द छनौट गर्छन् । एक वा दुई महिनापछि,तालिवानहरुले महिलाको लागि केहि कानून बनाउनेछन्, उनीहरुले महिलाहरु जे गर्न चाहन्छन् त्यो गर्न दिदैनन् । उनीहरुले महिलाको स्वतन्त्रतालाई कठिन बनाउनेछन् ।’
अहिले उनीहरु प्रतिक्रिया दिइरहेका छैनन् तर महिलाहरु होसियार हुनु पर्छ भन्दै आफू धेरै सावधान रहेको पत्रकार महिलाले बताएकी छन् ।
सन् १९९० दशकको अन्त र २००० को सुरुवातमा तालिवान समूहले इस्लामी शरिया कानूनको एक सख्त व्याख्यामा अफगानिस्तानमा आफ्नो शासनको समयमा टिभी, संगीत र सिनेमा प्रतिबन्धित थियो। उनको निष्कासनपछि त्यहाँ वर्षैपछि दर्जनौं टिभी सञ्जाल र १७० एफएम रेडियो स्टेशनरु बनाइएको थियो ।
तालिवानको सत्तामा फर्किने दृश्यलाई ध्यानमा राख्दै, केहि टिभी च्यानलहरुले आफ्ना महिला पत्रकारहरुलाई समाचार पढ्ने क्रमबाट हटाएका उनले बीबीसीलाई बताइन् । यहाँ सम्म कि राजनीतिक कार्यक्रमहरुको ठाउँमा इस्लामको धर्मशास्त्र छलफलको विषयसंग प्रतिस्थापन गरिएको जनाइएको छ।
जब सम्म प्रतिशोध जस्ता विषयहरु देखिएको छैन, धेरै च्यानलहरु आफ्नो सामान्य कार्यक्रम देखाउन थालेका छन् । भर्खरै एक पत्रकार सम्मेलनमा तालिवानले महिलाहरुलाई ‘इस्लामको कानूनको ढाँचामा’ काम गर्ने र अध्ययन गर्ने अनुमति दिइने समेत बताएका छन् ।
तर मंगलबार १७ अगस्तमा अर्को समाचार एंकर खादिजा अमीनले सोशल मिडियामामार्फत तालिवानले उनी र अन्य महिला कर्मचारीहरुलाई देशको सरकारी टिभी रेडियो टेलिभिजन अफगानिस्तानबाट अनिश्चितकालका लागि निलम्बन गरेको बताएकी छन् ।
धेरै ठाउँमा यी अतिवादीहरुले महिलाहरुलाई काममा जानबाट रोकेका छन् । केही महिलाहरुले बीबीसीलाई भने कि उनीहरु डरको कारण काम गर्न जाँदैनन् । बेहेष्ता काममा फर्किइन् । किनभने उनी अनिश्चितताको यस घडीमा आफ्नो न्यूजरूममा हुनुपर्ने आवश्यकता महसुस् गर्छिन् । उनले भनिन्, ‘मैले आफैंलाई भने, आउनुहोस् । यो अफगानिस्तानका महिलाहरुको लागि एक धेरै महत्वपूर्ण समय हो।’
जब उनी आफ्नो कार्यालय जाँदै थिइन् । उनीहरुलाई तालिवान लडाकुहरुले रोके र उनी एक्लै बाहिर आउनुको कारण सोधे। शरियाका अनुसार एक पुरुष नातेदार उनीसंग किन छैन? उनी भन्छिन्, ‘हामी राम्रो स्थितिमा छैनौं। हामी जान्दछौं कि यो अफगानिस्तानका महिलाहरुको लागि राम्रो छैन। आउँदो पुस्ताहरुको लागि, हामी लड्नु पर्छ, बलिदान पनि गर्नु पर्छ।’
यो पछिल्लो पटक जस्तो छैन । एक निजी क्लिनिक र काबुलको एक अस्पतालमा काम गर्ने एक स्त्री रोग विशेषज्ञले बीबीसीलाई भनिन्,‘उनको कामको जीवन राजनीतिक उथलपुथलले प्रभावित भएको छैन।’ नाम नखुलाउने शर्तमा डाक्टरले भनिन्, ‘म तीन दिन पछि काममा आएको छु। यहाँ स्थिति सामान्य छ।’
उनी भन्छिन्, ‘तालिवानले घोषणा गरेको छ कि महिला डाक्टरहरु अस्पताल र आफ्नो निजी क्लिनिकहरुमा काम गर्न जारी राख्न सक्छन् ।
डाक्टर भन्छिन्, ‘केहि स्थानहरुमा तालिबान सक्रिय रूपमा मानिसहरुलाई काममा फर्कन को लागि सोधिरहेका छन्, तर धेरै मानिसहरु अझै पनि डरको वातावरणको कारण आउँदैनन् ।’
उनी भन्छिन् ‘धेरै डाक्टर र सुँडेनी अझै अस्पताल आएनन किनकि उनीहरु डराएका छन् र तालिबानको घोषणाबाट विश्वस्त छैनन् ।’
स्वास्थ्य सेवाहरु या त अफगानिस्तानको धेरै भागहरुमा या त कम वा अस्तित्वमा छन् । तर देशमा नर्सहरुको संख्या बढाउने जस्ता उपायहरु मातृ मृत्युदर घटाउनका लागि गरिएका छन् । यो बाहिर जान्छ, काबुलका स्त्री रोग विशेषज्ञहरु आशावादी छन् ।
अस्पताल जाँदै गर्दा उनले सडकमा थोरै मानिसहरु देखेको र धेरै पसलहरु बन्द रहेको बताउँदै तालिवानले उसलाई उसको लुगा जाँच्न नरोकेको बताइन् ।
महिलाहरु एजेन्डाको हिस्सामा छैनन्
अफगानिस्तानको संसदमा २५० सीटहरु मध्ये २७ प्रतिशत महिलाहरुका लागि आरक्षित छन् र हाल ६९ महिला सांसद छन् । तर तालिवान नेताहरुकाबीचमा कुनै महिला छैनन् र उनीहरु महिलाहरुसंगै सरकार बनाउने छन् या छैनन् भन्ने अझै स्पष्ट छैन। एक महिला सांसद फरजाना कोचाई भन्छिन ‘हामी उहाँको एजेन्डाको बारेमा जानकार छैनौं। हाम्रो चिन्ता यो हो कि उनी कहिल्यै महिलाको बारेमा कुरा गर्दैनन् । उनी भन्छिन्, ‘महिला बिना बनेको सरकार अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र नागरिक समाजद्वारा जिम्मेवार हुनेछैन।’
फरजानाले भनिन्, ‘हामी महिलाहरुलाई समाजबाट हटाइनु हुदैन। हामीले हाम्रो काम जारी राख्नु पर्छ र सरकार संगै हामी जहाँ चाहान्छौं त्यहाँ राख्नु पर्छ।’
फरजाना छिटो परिवर्तन हुने स्थिति देखेर असहज छिन् । सडकमा कम महिलाहरु देखिन्छन् । जे होस, उनी यो पनि भन्छिन् कि केहि महिलाहरु अध्ययन र काममा फर्किएका छन् ।उनी भन्छिन् ‘सबै महिलाहरु डराएर आफुलाई घरमा थुनेर बस्दैनन्। तर महिलाहरु सामाजिक, मनोवैज्ञानिक र राजनैतिक रुपमा बदलिएका छन् । हामीमा धेरै कुराहरु लुकेका छन् । हामी सामाजिक सञ्जालमा पनि आउन सक्दैनौं, हामी आफ्नो काम गर्न सक्दैनौं। काम, घर बाहिर जान पनि सक्दैन। ’
महिलाहरु धेरै संख्यामा बुर्का किन्दैछन्। महिलाहरु टिभी स्क्रिनबाट हराइरहेका छन् । हामी उनीहरुलाई अन्य ठाउँमा पनि हराइरहेका छौं,‘उनले भने। तालिबान सत्तामा आउनुभन्दा पहिले नै कोचाईलाई चरमपन्थी समूहहरुको धम्कीको सामना गर्नु परेको थियो। उग्रवादको आलोचना गर्ने धेरै महिला राजनीतिज्ञहरु अहिले लुकेका छन् ।
तालिवान आउनेछन र मलाई मार्नेछन : मेयर गफारी
२६वर्षको उमेरमा देशको सबैभन्दा कान्छी मेयर जरीफा गफारीले तालिबानको हातमा उनको हत्याको पर्खाइमा रहेको बताइन् ।
जरिफाले बेलायती अखबार द इन्डिपेन्डेन्टलाई भनिन्, ‘म उनी यहाँ आउने पर्खाइमा छु। मलाई वा मेरो परिवारलाई सहयोग गर्ने कोहि छैनन्, म र मेरो श्रीमानसंगै बसेका छौं। तालिवान आउनेछन् र मलाई मार्नेछन् ।
म तालिवानमाथि विश्वास गर्दिन
एक अफगान शिक्षक र मानवअधिकार कार्यकर्ता पश्ताना दुर्रानीका अनुसार, तालिवानले महिला अधिकार बारे भन्ने र गर्नेमा फरक फरक रहेको बताइन् । तालिवानलाई महिला अधिकार के स्वीकार्य छन् रु उनीहरुले यो स्पष्ट पार्नु पर्छ। उनी नै थिए जसले महिलाहरुलाई अन्तिम पटक बुर्का लगाउन बाध्य पारे र १० वर्ष वा माथिका केटीहरुलाई स्कूल जान प्रतिबन्ध लगाए।
उनी अगाडि थप्छिन्, ‘आफ्नो जीवनको लागि खतराको बावजूद बोल्नु पर्छ। ‘मैले आज यो लडाई लड्नु पर्छ ताकि भावी पुस्ताले यी सबै संघर्षहरुको सामना गर्नु पर्दैन। तालिवान नेतृत्व महिला अधिकारको बारेमा धेरै अस्पष्ट छ र विगत केहि दिनहरुमा उनीहरुका लडाकुहरु उस्तै व्यवहार गरिरहेका छन् जसरी हामीले अनुमान गरेका थियौं ।’
‘केटीहरुलाई हेरात मा विश्वविद्यालय जान दिइदैन, कान्दाहारमा उनीहरुलाई बैंक बाट घर फर्कन भनिएको थियो र उनीहरुका पुरुष आफन्तहरुलाई आफ्नो पद भर्न भनिएको थियो,’उनले भनिन्,।
तेसैले तालीवानहरु विश्वभरिका देशहरुबाट आफ्नो सरकारलाई मान्यता दिने बाटो खोजिरहेका छन्, तर उनीहरुको व्यवहारलाई हेर्नुहोस्। उनीहरु के गर्दैछन्र ?
‘या त उनीहरुका खुट्टा सैनिकहरुको नियन्त्रण छैन वा उनीहरु मान्यता चाहन्छन तर काम गर्न चाहँदैनन् ।’ दुर्रानीले यो पनि सोधे कि तालिबान महिला अधिकारको उल्लेख गरेर के भन्न चाहन्छन् ? दुर्रानीले सोधिन्,‘के उहाँको मतलब हामी कहाँ जान सक्छौं, वा जसलाई हामी भेट्न सक्छौं, वा हाम्रा राजनीतिक अधिकार, प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार वा मताधिकारको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छौं।’
जर्मनीले महिला अधिकार सुरक्षित नभए अफगानिस्तानलाई दिइने सबै सहयोग बन्द गर्ने बताएको छ। तेसैले तालिबानले महिलाहरुलाई बिश्वका बिभिन्न देशहरुको बिश्वास जित्न केहि अधिकार दिन सक्छन्? दुर्रानी, जसले मलाला कोष शिक्षा च्याम्पियन अवार्ड प्राप्त गरिन, उनी विश्वास गर्छिन कि यदि तालिबानले केटीहरुलाई स्कूल जान प्रतिबन्ध लगायो भने उनीहरु आफ्नो शिक्षाको लागि इन्टरनेटमा भर पर्नु पर्नेछ।
उनी यो पनि चिन्ता गर्छिन् तालिबानले विद्यालयमा पढाईएका विषयहरु परिवर्तन गर्न सक्छन् । उनी भन्छिन्,‘केटीहरु पहिले जस्तै सामान्य कोर्स जारी राख्छन् वा उनीहरु मात्र इस्लामको अध्ययन गर्नको लागि हुनेछ, जुन हरेक अफगान विद्यार्थी पहिले नै अध्ययन गरी रहेको छ । मँ उनीहरुलाई यसको बारेमा विश्वास गर्दिन।’
म मात्र स्वतन्त्रता चाहन्छु
काबुलमा बस्ने एक युवा महिला उद्यमीले आफ्नो पहिचानलाई आजादी भनेर चिनाउन आग्रह गर्दै भनिन् कि तालिबान आफ्नो प्रतिज्ञाहरुप्रति कटिबद्ध छ। उनले भनिन्, ‘आजाद को अर्थ छ जो स्वतन्त्र छ। म केवल स्वतन्त्रता चाहन्छु। त्यसैले मैले यो नाम रोजे।’
उनी नयाँ शासकहरुसँग डराउँछन् र एउटा साधारण माग राख्छिन ‘म एउटा नयाँ सरकार चाहन्छु जसमा सबै अफगानहरु सामेल छन्। त्यसमा म तालिबान, प्रतिरोध समूह, सामान्य समूह, सबै धर्मका मानिसहरुको प्रतिनिधित्व चाहन्छु। यदि त्यसो भयो भने। नयाँ देश र नयाँ भविष्य। र उज्जवल भविष्य पनि। ’
तर वास्तविकता धेरै विचलित छ। आजादी पहिले नै आफ्नो आर्थिक स्वतन्त्रता गुमाईरहेका छन किनकि उनीहरुको व्यापार बन्द छ र धेरै मानिसहरु देश छोडेर जाँदैछन् ।
तालिवान शासन अन्तर्गत अन्तिम समयको भयानक यादहरु उसलाई सताउँछन्,महिलाहरुको लागि उनको व्यवहार तब धेरै आक्रामक थियो र उनी अझै राम्रो हुने कुनै आशा छैन।
आजादी तर्क गर्छिन्, ‘उनले आफ्नो लुगा, न कपाल वा दाह्री परिवर्तन गरेनन्। त्यसपछि उनी कसरी आफ्नो सोच परिवर्तन गर्न सक्छन्रु म त्यस्ता हल्लाहरुमा विश्वास गर्दिन।’ उनी भन्छिन्, यदि तालिवानले महिला र बिभिन्न समुदायका मानिसहरुलाई बाहिर राखे भने फेरि एक पटक हिंसा हुनेछ। त्यहाँ एक युद्ध हुनेछ।
यदि हामी लडेनौं भने, हामी बाँच्न सक्दैनौं। म ती मध्ये एक हुन जाँदैछु। म मर्न सक्छु र त्यो बिल्कुल सत्य हो। त्यसैले म साहसी हुनु पर्छ। म अफगानिस्तानबाट भाग्न सक्दिन। त्यसोभए मसँग मात्र एक मात्र विकल्प छ।